Otu anyị siri hụ ntụliaka 2019: European Union | odumblog
Otu anyị siri hụ ntụliaka 2019: European Union
posted on Jun. 21, 2019 at 7:17 am
Ndi nyocha European Union ekwuola otu ha si hụ ntụliaka 2019, nke e mere n’ọnwa Febụwarị. Onye isi ha bụ Maria Alena nyere akụkọ n’ụbọchị Fraide, ma kwukwa na ha tinyere ndumodu ha. Onye so ya mee nyocha bụ Keith Karlsen bụ onye na-anọchite anya European Union na Naijiria.
Dika Alena kwuru, ndi nyocha European Union zigara ndi nyocha iri itoolu na otu n’ebe emere ntuliaka, nari abụọ iri isii na otu na steeti iri atọ na isii nke Naijiria na ntuliaka nke onye ga-abụ onye isi obodo. Ha zigakwara ndi nyocha iri asaa na atọ n’ebe ntuliaka nari abụọ iri abụọ na atọ na steeti iri abụọ na abụọ n’oge ntuliaka nke ndi omeiwu.
Alena kwuru na Naijiria bụ ndi kwadoro ọchịchị onye kwuo uche ya. Ma ndumọdụ ha na-enye bụ ka ha jisie ike hụ na ehibere ukporo ọchịchị onye kwuo uche ya.
Onye isi ụlọọrụ na-ahụ maka ntụliaka nke Niajiria (INEC) bụ Ọkz. Mahmood Yakubu kwuru na ụlọọrụ INEC ga-eleba anya na ndumọdụ ndi nyocha ntuliaka European Union nyere ha, ma kwuo na ha ga-ebunye ndi omeiwu ozi a ka ha wee bido ọrụ.
odumblog June 21, 2019
Ụmụaka ruru nde asatọ anaghị aga akwụkwọ na Naijiria: UNICEF
Ka ndi ntorobia si egbu onwe ha na-enyezi nsogbu: NYCN
Odum Blog19 hours ago